“मैनाचरी जस्तो नबनौं, सत्य बोलौं” : मुख्यमन्त्री गुरुङ - Safal Awaj Safal Awaj
“मैनाचरी जस्तो नबनौं, सत्य बोलौं” : मुख्यमन्त्री गुरुङ
पोखरा, २७ जेठ । हँसिलो मुहारका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ आज भने अलि भावुक बनेका थिए । तर आफ्नो कुरा, सरकारको कार्यदिशा र योजनाको फेहरिस्त बताउँदा भने स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणकासाथ उपस्थित भएका थिए ।
विश्वासको मत लिदैं गर्दा उनले कर्याकालभरी सहयात्री पार्टीका साथीहरुसंग खण्डीत भएर जानुपर्ने स्थिति आउनु स्वभनिय नभएको बताए । उनले भने, तर अहिले सबै पार्टीहरु खण्डित भईरहेका छन्, कमजोर भईरहेका छन् र एउटाले अर्कोको विरोध गरिरहेको अवस्था छ । यतातिर कसैको ध्यान नै गएको छैन । खालि विरोध मात्र भईरहेको छ ।
पहिला पहिला त्यस्तो थिएन तर अहिले हाम्रै क्रियाकलापका कारण प्रदेश सभा सिर्जनशिल हुन नसकेको स्वीकार गरे । हामी सिर्जनशिल हुने दिशमा जानभन्दा पनि “मैनाचरी” जस्तो भएको किस्सा सुनाए । उनले भने, मैनाले घोकेको र सुनेको कुरा मात्रै दोहोर्याउँछ, हामी त्यस्तो बन्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा म हो तर हामी त्यस्तै भई रहेको छौं यो गलत कार्य हो । उनले भने, कहिलेसम्म हामीले माथि विभिन्न शिर्ष नेताहरुका कुराहरु घोकेर भन्ने ?
अर्काको भाकल पूरा गर्नका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । राजनीतिमा अर्काको भाकल पूरा गर्ने काम गर्न हुन्न । म विरामी छु त के भो । म सुरक्षित छु तर नागरिकको हालत के भएको होला भनेर अस्पतचाल जाने गरेको हो । जनतालाई झुक्याउने काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता हो । म सकि नसकि गएको हो । जनताको उत्साहको लागि गएको हो, मुऋयमन्त्री गुरुङले भने, सस्तो टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्दछु ।
सन्दर्भ मात्र मिलेको हो । केन्द्रमा २८ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने, कर्मचारी ५० हजार राख्ने हामीलाई स्थानिय र प्रदेशमा नचाहिने ? मैले केन्द्रमा भनेको हो । पुर्नसंरचनाको कुरा उठाएको हो ।
प्रदेशमा नमूना काम गरेको दावि
मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाप्रति जिम्मेवार छ यो मेरो दावा हो । जति काम भयो हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ । सून्यबाट शुरु गरेको काम हो पाठ्यक्रमको जो हामीले बनायौं । नीति बनाएर, जनतालाई एकिकृत बनाएर होम स्टेका कार्यक्रम ल्यायौं । अरुले गरेनन् शुरु गरकै हामीले हो र सबैको योगदानले हो ।
गण्डकी प्रदेशले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई संघिय सरकारले पछ्यायो । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक शुरु गयौं जो नमूना थियो र संघिय सरकारले पनि पछ्यायो ।
गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश भन्यौं । अरु कँही गरेको छ ? मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे । ९५ प्रतिशत विजुली पुगेको छ प्रदेशमा । आधारभूत खानेपानी गण्डकीको राम्रो कार्यक्रम मानेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट श्यावास भनियो, यो के राम्रो काम होईन ?
एक घर एक धाराको हाम्रो अभियान अन्य प्रदेशका लागि पनि सिको गर्ने प्रदेश भएको छ । प्राविधिक शिक्षा आरम्भ भएको छ जहाँबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादनको काम हुनेछ ।